अब लगभग सबै कार डिस्क ब्रेक संग पूरा गर्दै छन्। यो परिमाण को आदेश एक ड्रम भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। तथापि, मालिकहरूको सञ्चालन तात्दै को समस्या संग सामना गर्दै छन्। डिस्क को उच्च तापमान आफ्नो सुरक्षा प्रश्न हुन सक्छ। आखिर, केही बिन्दुमा प्रणाली बस निष्क्रिय हुनेछ। आजको लेखमा हामी किन गरम हेर्न हुनेछ ब्रेक डिस्क पैड परिवर्तन र कसरी यो समस्या निवारण गर्न पछि।
पहिले कार ब्रेकिंग सिस्टम ड्राइव को कार्य मा mechanically। समय, मेशिन अधिक आधुनिक एकाइहरु पूरक गर्न थाले। तिनीहरूले एक हाइड्रोलिक ड्राइभमा काम गरे। यो पेडल मा लगाएको बल कम गर्न सम्भव छ।
को ब्रेकिंग प्रदर्शन बढ्छ एकदम यस मामला मा। यसरी, प्रणाली एक ब्रेक तरल पदार्थ प्रयोग गर्दछ। यस राजमार्ग मार्फत बगिरहेको को काम सिलिन्डरहरु मार्फत, यो downforce सिर्जना गर्छ। फलस्वरूप, डिस्क संग सम्पर्क पैड। धेरै मोटर चालकहरुलाई यो तरल मा स्रोत कस्तो थाहा छैन। तर यो caliper सिलेंडर को दक्षता को राज्य मा निर्भर गर्दछ। विशेषज्ञहरु यस तरल पदार्थ हरेक2वर्ष वा 50,000 किलोमिटर परिवर्तन गर्न सिफारिस गर्छौं। किन समय अवधि छुट्याइएको छ? तरल धेरै hygroscopic छ किनभने यो छ। समय, यो चिस्यान को अवशोषित। सबै ब्रेक सिस्टम घटक अन्तिम हानिकारक, जंग पैदा। फलस्वरूप, पिस्टन त प्रभावकारी छैन ब्लक प्रेस। यो अक्सर यो बस एक स्थितिमा जाम छ हुन्छ। ब्लक, बारी मा, डिस्क संग सम्पर्क मा, ताप पैदा हुन्छ। अनुभवी मोटर चालकहरुलाई नियमित जलाशय मा ब्रेक तरल पदार्थ स्तर जाँच गर्न सल्लाह। यो न्यूनतम र अधिकतम अंक बीच हुनुपर्छ।
आवश्यक भएमा, यसलाई इच्छित स्तर माथि। एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु - यो फरक तरल मिश्रण गर्न आवश्यक छ। वर्ग डट-3, 4, 5, र 5.1 को एक भेद। तिनीहरू सबै एक उम्लनेबिन्दु (सय वरिपरि दुई डिग्री) र गुण छ। तपाईं तरल को प्रकारको पहिले के भर थियो थाहा छैन, यो पूर्ण प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
वर्षौंदेखि यो unladen वाहन वजन बढ्छ र इन्जिन शक्ति बढ्छ। कार मालिक, यसलाई थाह बिना ट्रिगर squeezes र ब्रेक लगान सिस्टम मनन गर्दैन। भौतिक को सरल नियमहरू सम्झन यसलाई Suffice। को घर्षण शक्ति प्रतिरोध वृद्धि पनि बढ्दै छ। एउटै पनि पाङ्ग्रा बारेमा भने गर्न सकिन्छ। गति polutoratonnom कार ब्लक थप compressive शक्ति आवश्यक कम गर्न।
को काम सतह को तापमान एकदम बढ्छ। र हामी यो गर्न आक्रामक ड्राइभिङ शैली थप्न भने, यो स्पष्ट किन हुन्छ गरम अगाडि ब्रेक डिस्क। छैन लायक अक्सर पेडल मा थिचेर, प्रणाली लोड गर्न जाँदै। यो स्रोत ब्लक र डिस्क नै मा नकारात्मक प्रभाव छ। उत्तरार्द्ध बस तात्दै वा bursting द्वारा विकृत हुन सक्छ।
तपाईं पैड परिवर्तन पछि गरम ब्रेक डिस्क छ भने, caliper अवस्था याद गर्नुहोस्। उहाँले wedged भने, छाडा पट्टी काम सतह मा आराम हुनेछ। फलस्वरूप, घर्षण गुणांक को वृद्धि। तपाईं पनि मा स्नेहक को उपलब्धता जाँच गर्नुपर्छ समर्थन को रेल वाहन। ढक्कन (को संयन्त्र को रियर छेउमा स्थित) अन्तर्गत ड्राई स्नेहक, धूलो र माटो हुनु हुँदैन। अर्को रबर anther अवस्था हेर्न। तिनीहरूले टूट वा punctured छन् भने तिनीहरू तुरुन्तै प्रतिस्थापित हुनुपर्छ।
मिश्रित ब्रेक लगान सिस्टम
जसले तरल पदार्थ वा अर्को सिस्टम मा के छैन। कारण सरल छ - निर्माता अगाडि डिस्क र पछिल्लो सेट ब्रेक ड्रम। स्वाभाविक, उत्तरार्द्ध सिस्टम छैन प्रभावकारी हुन्छ। त्यो यो डिस्क caliper बनाउँछ रूपमा लोड बाहिर काम गर्न असमर्थ छ। फलस्वरूप, ऊर्जा को सबै सामने धुरा गर्न प्रसारित छ। त्यसपछि ब्रेक गरम।
कारण त गरिबी "ड्रम" नियमन, वा ड्राइभिङ को तरिका मा छ। केही मोटर चालकहरुलाई मौलिक कार्य - सामने ventilated डिस्क मा राखे। यस्तो embodiment अलिकति सामान्य भन्दा कठिन। तर विशेष डिजाइन धन्यवाद छिटो ठंडा गर्दछ। Ventilated डिस्क जो बीच त्यहाँ हावा लागि grooves दुइ मोटाइ 5-7 मिमी को प्लेट, को हुन्छन्। केही निर्माता काम सतह perforations (छेउमा देखि साना प्वालहरू) पूरक।
एक ventilated ब्रेक डिस्क प्रकार कति छ? यसको मूल्य प्रति एकाइ दुई हजार rubles देखि दायरा। यस्तो तत्व मात्र सकारात्मक सेट गर्नेहरूलाई देखि प्रतिक्रिया। अब ब्रेक गरम सञ्चालन हुँदा। प्रतिस्थापन कारण - कारखाना ब्रेक कम दक्षता। अक्सर यस्तो प्रक्रिया घरेलू कार को मालिक बनाउँछ।
यो पनि पछिल्लो ड्रम को तरल पदार्थ प्रतिस्थापन र समायोजन पछि, ब्रेक डिस्क गरम हो कि हुन्छ। कारण काम वस्तुको राज्य हो। यसको मोटाई ध्यान। यो 20 भन्दा कम मिलिमिटरमा हुँदैन। यदि, तपाईं खरीद र ब्रेक डिस्क को एक नयाँ सेट स्थापना गर्नुपर्छ। खैर, म तिनीहरूलाई जोडी मा, छिमेकी तत्व को राज्य को बिना छ। साथै, निर्माता जो तपाईं यी तंत्र परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ म्याद समाप्त मा स्रोत निर्दिष्ट गर्दछ। को ब्रेक डिस्क परिवर्तन गर्दा? 150 हजार किलोमिटर - सीमा प्रतिस्थापन। म जूता स्वामित्व, यो अवधि धेरै सानो छ - 15-20 हजार। तथापि, स्रोतहरू धेरै मा ड्राइभिङ शैली मा निर्भर गर्दछ।
तत्व को मोटाइ 20 भन्दा बढी मिलिमिटरमा, र तपाईं अझै पनि पैड परिवर्तन पछि ब्रेक डिस्क basking हो भने, काम सतह अवस्था याद गर्नुहोस्। यसलाई पूर्ण समतल हुनु पर्छ। डिस्क "floated" छ भने, पैड संग सम्पर्क क्षेत्र धेरै कम हुनेछ। तदनुसार, यो घर्षण शक्ति धेरै पटक वृद्धि हुनेछ। हामी, लुकेको कमजोरीहरू आफ्नो ध्यान आकर्षित कुनै पनि मामला मा यस्तो विवरण मा चर्किएको प्रतिस्थापित गर्न आवश्यक छ। एक ब्रेक लगान तत्व, तर त्यहाँ nodules भने, स्थिति नाली सुरक्षित हुनेछ। यो एक र एक जोडी को लागि आधा हजार को क्षेत्र मा प्रक्रिया हुनुपर्छ। तपाईं डिस्क हटाउने संग रूपमा काम, र स्थान मा गर्न सक्नुहुन्छ।
, यो काम सतह को रंग लागि सम्भव छ वस्तु गरम गरिएको छ कति पत्ता लगाउनुहोस्। तसर्थ, डिस्क एक पहेलो रंग छ भने, अधिकतम तापक्रम 280 डिग्री थियो। नीलो रंग संयन्त्र 400 डिग्री गर्न गरम छ भन्ने संकेत गर्छ। ड्राइव 500 वा बढी डिग्री सेल्सियस को दायरामा संचालित गर्दा पटक हो। यस्तो अवस्थामा मा काम सतह कालो छ।
त्यसैले, हामी पैड प्रतिस्थापन पछि गरम छ ब्रेक डिस्क लागि कारण बाहिर फेला परेन। भविष्यमा सन्दर्भको लागि, तपाईं नयाँ घर्षण तत्व स्थापना गर्दा राम्ररी सिट देखि माटो र जम्मा हटाउन। पनि zakisaniya calipers मा गाइड र anthers मा स्नेहक परिवर्तन। समय मर्मतका प्रदर्शन, र त तपाईं ब्रेक डिस्क परिवर्तन गर्न जब सोच गरिनेछ।
एक कार खुम्च्याउने कसरी चयन गर्ने?
अलार्म नेवला - आफ्नो कार को लागि सबै भन्दा राम्रो सुरक्षा प्रणाली!
नयाँ "लीफान 820": प्राविधिक विनिर्देशों, उपकरण, मूल्य र मालिकको समीक्षा
Bacopa - शुरुआती लागि बीउ को बढ्दै
Armor र Vikings को हतियार: विवरण, फोटो
कति रूस मा मोडेल कमाउन छ?
टर्कीबाट ल्याउन के लागी: मसालेबाट प्राचीन वस्तुहरु बाट
Anastasia मेदभेदेभ। जवान लेखक को debut
टोन क्रीम "Chanel": दृश्यहरु र समीक्षा beauticians